मूड अफ छ ? त्यसो भए खानुस् यी खानेकुरा
कहिले काही सानो कुराले पनि मूड अफ हुन्छ हाम्रो । जती जे गरेपनी मूडमा आउन हामीलाई मुश्किल भएको हुन्छ । चिसो पानी पिउने वा गीत संगित सुन्ने पनि गर्छौ । हामीलाई सधैं खुशी राख्ने हार्मोनको नाम हो सेरेटोनिन हार्मोन । यो हार्मोनको सक्रियता बढाउनको लागि हामीले खाने कुराहरुमा ध्यान दिनु पर्छ ।
खुशी हुनको लागि हामीले पोटाशियम, म्याग्नेशियम, र फलिक एसिडको मात्रा धेरै भएका खानेकुराहरु खाने गर्नुपर्छ । अण्डा–ओमेगा ३, फ्याट्टी एसिड,जिंक, भिटामिन्स र प्रोटीनले भरपूर अण्डाले हामीलाई मानसिक रुपमा स्वस्थ राख्छ ।
रातो डल्ले खुर्सानी खादा पनि हामी फ्रेश महशुस गर्ने गर्छौ । जसमा भिटामिन सी र भिटामीन ए धेरै हुन्छ । नरिवल–नरिवलमा हुने ईलेक्ट्रोलाईट्सले शरीर र दिमागलाई हाइड्रेड राख्छ र हामीलाई खुशी बनाउँछ ।
सिमीलेपनी म्याग्नेशियमले भरपूर दिएर खुशी बढाउने हार्मोनलाई सक्रिय बनाउँछ । यसै गरी केराले पनि फ्रेस बनाएर खुशी दिन्छ । पोटाशियम, म्याग्नेशियमका साथै प्रोबायोटिक, भिटामिन बी ६, ट्रायप्टोफेन र आइरनले हाम्रो मुड फ्रेश राख्न मद्दत गर्छ । यसका साथै हामीलाई खुशी राख्न पनि यी तत्वहरुले महत्वपूर्ण भूमिका खेलेका हुन्छन् ।
हाम्रो खनपानले पनि हामीलाई दुखी र खुशी बनाउन मद्द्त गर्दछ । तसर्थ खानपानमा ध्यान दिदा धेरै रोग बाट हामीले सजिलै छुटकारा पाउछौ ।
तपाई गर्भवती हुनुहुन्छ भने भुलेर पनि कोठामा नराख्नुस् यी ४ चिज
सपनामा के कुराहरु देखे के हुन्छ ? यी देख्नुभयो भने कसैलाइ नसुनाउनुहोस (भिडियाे)